Orinasa voajanahary tsy mpiorina, mpamatsy - Mpanamboatra zezika an-kibon'ny tany China
Lemandou Calcium Ammonium Nitrate dia loharanom-kalsioma sy azota mahomby be azo ampiasaina amin'ny zavamaniry.
Ny kalsioma dia otrikaina lehibe faharoa, mifandraika mivantana amin'ny fananganana ny rindrin'ny sela amin'ireo zavamaniry. Satria voafetra ny fivezivezena kalsioma ao amin'ilay zavamaniry, dia tsy maintsy omena mandritra ny vanim-potoana fitomboana mba hitazomana ny haavon'ny sela ao anaty zavamaniry ary hiantohana ny fivelarana mety. Ny CAN dia manampy ny zavamaniry mba hanoherana ny adin-tsaina bebe kokoa ary hanatsara ny kalitaon'ny fiainana sy ny talenta.
Lemandou calcium nitrate dia loharanom-pahalalana azo avy amin'ny calcium calcium sy nitrate nitrate. Ny nitrogen nitrate no loharanon'ny azota izay misy fiatraikany sy calcium amin'ny kalsiôma ary afaka mampiroborobo ny fitrohana calcium. Noho izany, ny nitrate calcium dia afaka manampy ny rindrin'ny sela hamboly, hanatsara ny kalitaon'ny voankazo sy ny fiainana talantalana.
CN + B dia mety levona 100% ao anaty rano ary zezika malaky anaty rano misy calcium calcium nitrate. Boron dia afaka mampiroborobo ny fifohana kalsioma. Mandritra izany fotoana izany dia ampiana kalsioma sy borona, haingana ny zezika ary avo kokoa ny tahan'ny fampiasana. Zezika tsy miandany izy io, mety amin'ny tany maro. Izy io dia afaka manitsy ny pH tanety, manatsara ny firafitry ny fitambaran'ny tany, mampihena ny fitifiran'ny tany ary mampihena ny fahalotoan'ny tany. Rehefa mamboly vokatra ara-toekarena, voninkazo, voankazo, legioma ary voly hafa, ny zezika dia afaka manalava ny vanim-potoana voninkazo, mampiroborobo ny fitomboan'ny faka, ny taho ary ny ravina, manome antoka ny loko mamirapiratra amin'ny voankazo, ary mampitombo ny atin'ny siramamy ao amin'ireo voankazo. . Izy io dia afaka manalava ny vanim-potoanan'ny ravina sy ny vanim-potoanan'ny zavamaniry ary mampihemotra ny fihenan'ny voly. Izy io dia afaka manatsara ny fandeferana amin'ny fandeferana ny voankazo, mampitombo ny fitehirizana ny voankazo sy legioma, ary maharitra ny fitehirizana sy ny fitaterana.
Lemandou Magnesium Nitrate dia manome maneziôma sy azota amin'ny endrika misy zavamaniry. Ilaina ny magnesium amin'ny fitomboana mahasalama ny zavamaniry. Ary ny nitrate dia manamora ny fampiakarana ny magnesium amin'ny zavamaniry, ka manatsara ny fahombiazany. Izy io koa dia mampanankarena ny sakafo mahavelona amin'ny zavamaniry mora azota, mora azona.
Lemandou potassium nitrate (KNO₃) dia zezika kristaly mety levona anaty rano.
Ny potasioma no otrikaina voalohany mifandraika amin'ny kalitaon'ny vokatra rehetra, matetika ampiasaina ho zezika ho an'ny zava-maniry avo lenta, manampy amin'ny fanatsarana ny haben'ny voankazo, endrika ivelany, lanja mahavelona, ​​tsiro ary mampitombo ny fiainana talantalana.
Ny solub NOP koa dia akora tena ilaina amin'ny famokarana NPK mety levona amin'ny rano.
Lemandou urea miaraka amin'ny atiny misy azota 46 isan-jato, dia vokatra zezika azota miorina. Ny zezika urinia dia be mpampiasa amin'ny fambolena. Io no endrika zezika azota mahazatra indrindra eran'izao tontolo izao. Heverina ho loharanom-pahalalana azota ekonomika izy ireo. Novokarina avy amin'ny amoniaka sy gazy karbonika, manana ny azota avo indrindra amin'ny zezika azota miorina izy io. Amin'ny maha vokatra granular azy dia azo ampiharina mivantana amin'ny tany ny urea amin'ny alàlan'ny fitaovana fanelezana mahazatra. Ho fanampin'ny fampiharana ny tany, ny zezika urea dia azo ampiasaina amin'ny zezika na amin'ny fampiharana ravina ravina. Na izany aza, ny zezika urea dia tsy tokony hampiasaina amin'ny kolontsaina ambanin'ny tany, satria hivoaka avy ao anaty kaontenera avy hatrany ny urea.
Zezika azota tsara (izay fantatra amin'ny anarana hoe vovo-tany zezika) dia mety amin'ny tany sy ny voly ankapobeny. Izy io dia afaka mampitombo ny rantsany sy ny raviny maniry mafy, manatsara ny kalitaon'ny voankazo sy ny vokatra ary manatsara ny fanoherana ny vokatra amin'ny loza. Izy io dia azo ampiasaina ho zezika ifotony, zezika fanaovana topdressing ary zezika voa.
Ny potasioma sulfate dia sira tsy mitambatra miaraka amin'ny raika simika K Ψ so ₄. Amin'ny ankapobeny, ny atin'ny K dia 50% - 52%, ary ny atin'ny S dia manodidina ny 18%. Ny sulfate potassium madio dia kristaly tsy misy loko, ary mavomavo mavo ny ankamaroan'ny fijery ny potasioma sulfate potasioma. Ny potassium sulfate dia zezika potasioma tsy voavahan-drano tsara noho ny hygroscopicity ambany, ny mofomamy kely, ny toetra ara-batana tsara ary ny fampiharana azo ampiasaina. Ny sulphate potasioma dia mety indrindra amin'ny voly ara-toekarena, toy ny paraky, voaloboka, betiravy, zavamaniry dite, ovy, rongony ary hazo fihinam-boa isan-karazany. Izy io ihany koa no akora fototra amin'ny famokarana azota klôroina, fosforôra, zezika mitambatra potassium ternary. Ny potassium sulfate dia zezika asidra ara-tsimika, zezika fisiolojika, izay mety amin'ny tany maro (tsy manaka ny tany tondra-drano) sy ny voly. Rehefa avy ampiharina amin'ny tany ny ion potasioma dia azo tototry ny voly na tototry ny koloidim-tany. Ny valiny dia naneho fa ny potasioma sulfate dia azo ampiharina amin'ny voly Cruciferae sy ny voly hafa izay mila solifara bebe kokoa amin'ny tany tsy fahampian'ny solifara.
Izy io dia azo ampiasaina hisorohana ny aretina atsy amin'ny akanin-jaza, ary zezika mahazatra koa io mba hanampiana zezika singa zinc. Azo ampiasaina ho zezika ifotony, zezika foliar, sns.  Ny zinc dia iray amin'ireo singa mahavelona ilaina amin'ny zavamaniry. Ireo zana-ketsa fotsy dia mora miseho amin'ny katsaka noho ny tsy fahampian'ny zinc. Rehefa matotra ny tsy fahampian'ny zinc, hitsahatra tsy hitombo na ho faty akory ireo zana-ketsa. Indrindra ho an'ny tany loam sandam-pasika misy sanda PH avo dia tokony hapetraka ny zezika zinc toy ny zinc sulfate. Ny fitomboan'ny zezika zinc koa dia misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny vokatra. Fomba fanamorana: makà zezika zinc 0,06 ~ 0,06 kg, rano 1 kg, fitafiana voa 10 kg, apetaho mandritra ny 2 ~ 3 ora. Alohan'ny famafazana, zezika zinc dia napetaka amin'ny sosona rhizosfera miaraka amin'ny 0,75-1kg / mu. Raha maivana amin'ny zana-ketsa ny lokon'ny ravina, azo zohina amin'ny 0,1kg / mu ny zezika zinc